शासकहरू आफ्नो चाहनालाई नै जनताको चाहना भनि बुझ्छन् - हिमाल दैनिक
प्रधानमन्त्रीलाई गिरिको चुनौतिः यो संसदमा मात्रै ब्हिप लागू नहुनेगरी गोप्य ढंगबाट थाहा होस त पानीजहाजको प्रस्ताव कतिलाई मान्य छ? हेरु त म!
२३ बैशाख २०७६, सोमबार १९:५०
समय प्रदान गर्नु भएकोमा धन्यवाद।
यस नीति तथा कार्यक्रममा छलफल हुने क्रममा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले बाहिर कुनै कुराकानीमा टिप्पणी गर्नु भएको कतै पढेँ।
खोई नीति तथा कार्यक्रममाथि गम्भिर छलफल भयो भनेको खाली हावा कुरा मात्रै भए, हलुका कुरा मात्रै भए भनेर भन्नु भएको छ।
नभन्दै सारा बहस राष्ट्रपतिले मेरो सरकार किन भन्नु भयो, किन भन्नु भयो मात्रैमा केन्द्रीत भएको देख्दा प्रधानमन्त्रीको पीडा यथार्थ हो जस्तो लागेको छ मलाई।
राष्ट्रपतिले मेरो सरकार भन्नु आँफैमा स्वयंमा त्यत्रो आपत्तिजनक कुरो मलाई कमसेकम लाग्दैन। अब मेरो पार्टीले त्यसलाई संशोधन नै गर्ने भनेको छ। संशोधन गर्ने भन्ने विषयमा पक्ष÷विपक्ष कतै नलागी एउटा कुरा भन्न चाहन्छु। कुनै पनि शब्द, अब तपाइहरुलाई प्रधानमन्त्रीको अध्ययनकाबारेमा कति थाहा छ कुन्नी? जेलका वर्षौँ वर्ष यत्तिकै विताउनु भएको छैन।
उहाँ जस्तो सूचना भएको, जानकारी भएको व्यक्ति मैले त राजनीति जीवनमा कमै देखेको छु। लगभग अर्को गणेशमान सिंह हुनुहुन्छ उहाँ। हेर्दाखेरि केहि नजाने जस्तो, नबुझेको शास्त्रै छैन उहाँले।
त्यसैले भाषाका र शब्दमा के हुन्छ भने, अविधा, व्यञ्जना र लक्ष्यणा भन्ने हुन्छ। यहि मेरो प्रधानमन्त्री कसले भन्यो भन्दा चर्चा नहुने, यहाँ भने चर्चा हुने?
यसकाबारेमा चाहिँ स्पष्टिकरण दिनुहुने प्रधानमन्त्रीले अलिकति विचार गर्नु पर्छ।
के छ भने, राष्ट्राध्यक्षले वेलायतको परम्परा अनुसार भारतको परम्परा अनुसार, अन्य मुलुकमा भएका गणतन्त्रको परम्परा अनुसार पनि मेरो सरकार भन्न सक्थ्यो। तर, यहाँ सवाल के पर्यो भने, देश एउटा गुणात्मक रुपले नयाँ व्यवस्थामा आएको छ।
नयाँ व्यवस्थामा आएको बेलामा सबैले गणतन्त्र, गणतन्त्र भनेका छन्। बलिदान भएर आएको छ। अब यो नयाँ परिस्थितिमा मुलुकले कस्तो राष्ट्रपति खोजेको छ? कस्तो प्रधानमन्त्री खोजेको छ? सादगी, सरलताका जीवन मूल्यको समाजवादसँग कुनै सम्बन्ध छ कि छैन? एकछिन म पस्दै थिएँ, अगाडि गाडी, पछाडि गाडी, माथि हेलिकप्टर, तल पानीजहाज, यसरी भूँइमा टेक्दै नटेक्ने अवस्थाका मन्त्री, प्रधानमन्त्रीहरु, जसलाई उहाँकै पार्टीका विवेकशील सदस्यहरुले बारम्बार संकेत गरेर भन्दैछन्, यो राजा, महाराजाहरुलाई पनि लज्जित गर्ने खालको रहर हाम्रो भयो है भनेर।
एक पटक एक दिनका लागि पनि गृहमन्त्री त हुनै नहुने। गृहमन्त्री भयो कि कालो सीसा भएको जीप, अगाडि गाडी, पछाडि गाडी, माथि हेलिकप्टर, तल पानीजहाज चढ्नै पर्ने। अब एक पटक पूर्वगृहमन्त्रीको यो रवाफ भएपछि वर्तमानको त हुने नै भयो। प्रधानमन्त्रीलाई त झन के भन्ने? अगाडि साइरन, पछाडि साइरन, माथिको निगरानी त बाँकी छ क्यारे।
यो देखेर पीडित भएर मान्छेहरुले विल्कुलै संसदीय शब्दकाप्रति पनि आपत्ति प्रकट गरेका हुन है प्रधानमन्त्री महोदय। मैले बुझेसम्म।
शब्द त्यति खतरनाक छैन। तर, शब्दलाई मैले माथि भनेजस्तै सन्दर्भमा हेर्दाखेरि सम्बन्धित मान्छेलाई चित्त दुख्छ। म चित्त दुखेका साथीलाई पनि बरु चित्त नदुखाउनु भनेर अनुरोध गर्छु।
सवाल यस पत्रमा एक ठाउँमा राष्ट्रपतिले के भन्नु भएको छ भने, यति राम्रो विपक्षी दलसित सबै दलहरुकाबीचमा सहकार्य र विश्वास भएको वातावरण नै थिएन। यो चाँही दृष्टि नपुगेको जस्तो छ।
मैले के देखेको छु भने यत्ति नराम्रो सत्तापक्षसँग सम्बन्ध नै थिएन। प्रधानमन्त्रीको र विपक्षी दलको नेताको कोठा सँगसँगै राखिएको छ। यिनीहरुको भेट भइहालोस् भन्ने हिसाबले त्यो राखिएको होला। तर, अहिलेको परिस्थितिमा त अब एउटाको बैठक सिंहदरबारमा एउटाको बैठक यहाँ राखे हुन्छ।
यिनीहरुको भेट नभएकै जाती छ। त्यसैले विपक्षका नेतालाई चित्त बुझाउनु भएपनि यो संशोधनमा भोटिङ नगराइकन यिनीहरुको कुरा मानिदिनुहोस् भन्ने मेरो प्रधानमन्त्रीलाई अनुरोध छ। यो कुरा सिद्धियो।
अब गम्भिर कुरा गर्न छलफलमा मलाई सबैभन्दा मन परेको कुरा धेरै छन्। एउटा कुरा छ ३८ नम्बरमाः प्रत्येक दिन यस सरकारले (मेरो सरकारले) एक कदम त चालेकै हुन्छ भनेको छ। यो अत्यन्त गम्भिर वक्तव्य हो। एक कदम नै चाल्नु पर्छ प्रत्येक दिन। जस्तै लामो यात्रा पनि एकहजार कोषको यात्रा पनि एकहजार लिको यात्रा पनि (चाइनिजमा लि भन्ने कोष भन्दा लामो हुँदोरहेछ) अर्थात थाउजेन्स् माइल लीको यात्रा पनि एक स्टेपबाट सुरु हुन्छ भनेर कुनै जमानामा लाओद्धिनले भनेका रहेछन्। हो एक कदमबाट थाल्नु पर्छ। एक कदम पर्याप्त छ दिनको एक कदम। तर, कदम कतातिर सारिदै छ? पूर्वतिर कि पश्चिमतिर? समाजवादो उन्मुख कि दलालोवादो उन्मुख? त्यो बडा प्रश्न छ। त्यसैले एक कदम चालेकोमा पूर्ण समर्थन गर्दछु। म समर्थन मात्रै गर्दिन, जस्तै आगामी वर्षलाई वृक्षारोपणको वर्ष भनेको छ। नेपाली कांग्रेसका कर्मठ कार्यकर्ताहरुलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु, यो वृक्षारोपण हामीले बी.पी.को स्मृतिमा गरेका थियौँ। त्यसैले यदि संशोधन प्रस्ताव राख्न मिल्छ भने वृक्षारोपणलाई विशेष गम्भिरतापूर्वक गरौँ है भनेर हालौँ हामी, एकदम राम्रो प्रस्ताव छ त्यो। त्यसलाई म मुक्तकण्ठले प्रशंसा गर्दछु।
तर, पानीजहाजको जुन कुरा छ जनताको चाहना पानीजहाज हो भन्ने, साँच्चै जनताको चाहना पानीजहाज हो? अक्सर राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले के गर्छन भने, आफ्नो चाहनालाई जनताको चाहना भनि बुझ्छन्। आफ्नो चाहनालाई जनताको चाहना भनि बुझ्न थालेपछि बडा मुस्किल हुन्छ। अत्यन्तनै मुस्किल हुन्छ। पानीजहाज मुलुकलाई चाहिएको छ, नचाहिएको होइन तर, एउटा भएको हवाइजहाजको पनि विजोग छ। चलिराखेको त्यो जहाजको विजोग गर्नेको श्रेय अलिअलि हामी पनि लिन्छौँ। धमिजा काण्ड, लाउडा काण्ड, वाइडबडी काण्ड। अरेबाबा दशवटा हवाइजहाजको प्रतिस्पर्धामा हाम्रो नेपाल एयरलाइन्स त चलिदिओस्। नेपाल एयरलाइन्सलाई पहिले चलाउन न। बिस, पच्चिसवटा जहाज पहिले चलाउँ, त्यसपछि रेल बनाउँ, त्यसपछि पानीजहाज पनि चलाउँला। नचलाउने कुरै छैन। एउटा क्रमिकता बनाउँ। होइन भने जनताको चाहनाकाबारेमा त्यसलाई माक्र्सवादी शैलीमा मनोगत पाराले बात नगरौँ। बस्तुगत पाराले बात गरौँ।
म, थाहा छ यो लोकतान्त्रिक वक्तव्य होइन, तर, चुनौति दिन चाहन्छु यस रोष्ट्रमबाट छोडिदिनहोस् जनमत संग्रह गर्ने कुरा हवाई कुरा हुन्छ। यो संसदमा मात्रै ब्हिप लागू नहुनेगरी गोप्य ढंगबाट थाहा होस त पानीजहाजको प्रस्ताव कतिलाई मान्य छ? हेरु त म।
त्यसैले हे, प्रधानमन्त्री महोदय, हे राष्ट्रपति महोदय, जनताको चाहना हजूरको चाहना हो, मेरो पूर्ण समर्थन छ। तर, अलिकति ढिलो गरौँ, वृक्षारोपण छिट्टै गरौँ।
अब गम्भिर विचार गर्नु पर्ने हुँदा संसारमा विकास भन्ने शब्द जुन छ त्यो यहाँ धेरै पटक आएको छ। विकास जस्तै मिल्दोजुल्दो एउटा शब्द म भन्न चाहन्छु, त्यसलाई प्रगति भनिन्छ। प्रगति बहुआयामिक हुन्छ। विकासलाई तथाकथित ग्रोथरेटबाट नाप्न सकिन्छ। ग्रोथरेट ६ बाट ७ पुग्यो भने ७ बाट ८ वा ९ पुग्छ, भोलि १२ पनि पुग्न सक्छ। कसैको केहि लाग्दैन। ग्रोथरेट बढिराख्दछ। मैले प्रगति किन भनेको पछि भन्छु। यसमा सानो किन भनेदेखि त्यसमा प्रधानमन्त्रीलाई उखान टक्का गर्न बढो इच्छा लाग्दछ। उखान टुक्काको एउटा ऐतिहासिक घटना बताउँछु।
प्रधानमन्त्री थिए चर्चिल, उनी बोल्दै थिए। बोल्दा बोल्दै उनले एकचोटी भनिदिए यो मुलुकको बृद्धिदर मैले भन्दै गर्दा अर्कोले बीचमै जुरुक्क उठेर कति गरेको छ भन्दा जरुरत भन्दा बढ्ता मैले भनिदिइसकेँ। दैनिक मैले १५ आना गराइदिएको छु भनेर भने। अर्का सांसद उठेर भने, होइन हजुर यो त १५ आना छैन ६ आना पुग्छ। ल भोलि जवाफ दिन्छु भनेर भोलि अर्थमन्त्रालयमा गए। त्यहाँ होइन हजुर यहाँ त यस्तो यस्तो छ। प्रधानमन्त्रीले बोलेको कुरा त गल्ति छ भनि सचिवले भने। त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले भने, तलाई सचिव राखेको बल्ल अस्ति जगेडाबाट यहाँ ल्याएको छ, मेरो तथ्य देलास् भनेर कि विपक्षीको तथ्य देलास् भनेर? भनि हपारे।
लोकसेवा आयोगको परिक्षामा पास भएर आएका हाकिमलाई मुख्यतयः सचिव र मुख्यसचिवलाई वेलायतमा किन बनाइदोरहेछ भने प्रधानमन्त्रीले बोलेको कुरामा समर्थनमा तथ्य खोज्ला भनेर। यो विल्कुल ऐतिहासिक कुरा हो चर्चिलको संस्मरणमा पढ्न सक्नुहुन्छ।
त्यसैले तथ्यकाबारेमा कुरै गर्न चाहन्न। म सोझै के भन्दैछु भने विकासको जुन अवधारणा छ, त्यसकाबारेमा वर्तमान सरकारले, नेपाल सरकारले, जिउँदो शहिद केपी ओलीको सरकारले, साहदतबाट उम्किएका सहअध्यक्ष प्रचण्डको सरकारले विचार गरोस्।
विकासको एउटा मोडल संसारभरीमा असफल भइसकेको छ, जसलाई विकास भनिन्छ। विकास र विदेशी ऋणले श्रीलंका जस्ता देशलाई तन्नम बनाइसकेका छन्। विकासको अर्को मोडल पनि छ, साधारण पढ्ने मान्छेले पनि गुगलमा गएर अल्टरनेटिभ डेभलपमेन्ट हेर्यो भने थाहा पाउँछ।
समय थोरै छ, तपाइले अल्टरनेटिभ डिभलपमेन्टका लाइनमा सोच्नुहोस्। जहाँ कि बृद्धिदर होइन, रोजगारको चिन्ता गरिन्छ। नेपालका त्यी लाखौँ विदेशीएका मान्छेलाई कुन योजनाबाट ल्याउनु हुन्छ? भन्न त भनिएको छ एक ठाउँमा पाँच लाखलाई रोजगारी दिन्छु, त्यो रोजगारीको अवसर खोज्नुहोस्, दश वर्षपछि नेपालको अनुकरण विश्वले गर्नेछ। अमेरिका र युरोपको कुरा छोडिदिनुहोस्, कुनै समय गौतमबुद्ध लोकप्रिय भएजस्तै वर्तमान सरकारका नेता पनि कमसेकम तेस्रो विश्वमा लोकप्रिय हुन्छन्।
प्राविधिक भाषामा भन्दा आज मुलुकलाई आर्थिक बृद्धिदरका आधारमा होइन, तथ्याङ्क र मिथ्याङ्कका आधारमा होइन, त्यी विदेशमा खटिरहेका नेपालीलाई फिर्ता गर्ने आधारमा चलाउनु परेको छ।
एउटा कवि थिए, छन्, मीनबहादुर विष्ट भन्ने, लाउरेको कुरामा उनले लेखेका थिए, क्या रख्खा है नेपालमे साला पहाडमे। रुँदै हिमालका त्यी डाँडा काँडा छेक्दै, हरियाली हेर्दै त्यी कविता धेरै तपाईहरुलाई थाहा होला।
आज उनले हिन्दुस्थान जाने बेलामा, लाहुर जानेबेलामा उनले त्यो लेखेका थिए, क्या रख्खा है साला पहाडमे। हिन्दुस्थान गएको मानिस हिन्दी बोल्न थाल्दछ नि। एउटा गरिव गाउँको पहाडे गाउँको, प्राकृतिक सम्पदा भएको गाउँको दिल्ली पुगरे चौकीदारी र दरवानी गरेर यस्ता कुरा भन्न थालेको थियो, क्या रख्खा है डढेल्दुरामे, क्या रख्खा है पाथिभरामे, स्याङजामे। आज त्यी मध्यपूर्वमा प्रचण्ड गर्मीमा काम गरिरहेका मानिसलाई जुन योजनाले नेपाल फर्काउन सक्छ त्यो योजना हुन्छे समाजवाद उन्मुख, प्रगतिमुखी। अहिले प्रगतिका नाउँमा हामी विनासको बाटोमा जाँदैछौँ।
प्रधानमन्त्री महोदय, अर्थमन्त्री महोदय, यसकाबारेमा सोचिदिनुहोस्।
(सरकारकाे नीति तथा कार्यक्रममाथिकाे छलफलमा प्रतिनिधि सभाकाे वैशाख २३ गतेकाे बैठकमा व्यक्त विचार)
Prevपछिल्लोराष्ट्रपतिले मेरो सरकार भनेकोमा विरोध गर्नुको औचित्य छैनः प्रम ओली
अघिल्लोभट्टराई र यादवले भनेः सानो पसल चालउन एकताकाे सटर खाेलेकाे होइनNext